At 11/02/2012 10:26:00 PM No comments:
တစ်ကျောပြန်ဖြစ်ပွားလာသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီများအနေဖြင့် မတည်ငြိမ်မှုများအား ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေ ပးရန် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင်က နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့က ခေါ်ယူအ သိပေးခဲ့ ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတ်ီက သိရသည်။
At 11/02/2012 10:09:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြိုဆိုပါသည်။ တရုတ်တို့အတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီး၊ ရေနံဓါတ်ငွေ့သိုက်များစွာကြွယ်ဝသောမြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ အာရှမူဝါဒနှင့် တရုတ်၏ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးမူဝါဒတို့အတွက် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေသည်။ ထို့အပြင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တပ်မတော်အစိုးရကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်တို့၏ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအချက်အချာနေရာတွင် မီးလောင်နေသောအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသဖြစ်သည်။
At 11/02/2012 10:01:00 PM 1 comment:
At 11/02/2012 06:36:00 PM No comments:
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်နမ့်ဆန်မြို့
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်နမ့်ဆန်မြို့တွင် ယနေ့ မနက်ပိုင်း က မီးလောင်ရာ နေအိမ် ၅၀ ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများကပြောပါသည်။
At 11/02/2012 06:34:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍအနေဖြင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့်အညီ
At 11/02/2012 03:53:00 PM No comments:
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် သုတေသန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့သည် ရေငုပ် သင်္ဘောပေါ်မှ ပစ်လွှတ်နိုင်သော K-15 ဒုံးပျံအား ပထမ အကြိမ် စမ်းသပ်မှု အပါအဝင် ပြည်တွင်းထုတ်ဒုံးပျံများအားစမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲထား သည်ဟု နိုဝင်ဘာလ
At 11/02/2012 03:39:00 PM No comments:
ယခုနှစ် အာဆီယံ ၁၀၀ ခေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ဖိုရမ်၏ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်မှာ “Turbulent World. Rising Asia. Where do we go from
At 11/02/2012 03:29:00 PM No comments:
အရှေ့ တရုတ် ပင်လယ် အတွင်းရှိ ကျွန်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ် နိုင်ငံနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံတို့ အကြား အခြေအနေ တင်းမာ နေစဉ် ထပ်မံ၍ တရုတ် နိုင်ငံအား စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်စေမှု အဖြစ် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန် တို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု
At 11/02/2012 03:15:00 PM No comments:
At 11/02/2012 03:08:00 PM2comments:
ရခိုင်တွင် ပေါ်ပေါက်နေသော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများကြောင့် မြန်မာ- ဘင်္ဂလာနယ် စပ် ပင်လယ်ပြင်တွင် နှစ်ဘက် နိုင်ငံ၏ ရေတပ် သင်္ဘောများ ကို တိုးချကာ လုံခြုံရေး မြှင့်တင် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
At 11/02/2012 03:00:00 PM No comments:
ကလေးငယ်အသံနဲ့ ဘတ်(စ်)ကားအရှေ့ပေါက်နားမှာ စပါယ်ယာအကူအလေးကို ကြည့်မိရင်း “ဒါတွေဟာ အသက်မပြည့်သေးသူတွေကို အလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ညွှန်းလို.ရမလား၊ မရဘူးလား” စတဲ့ မေးခွန်းများစွာနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ. ရှာဖွေနိုင်မယ့် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်များနိုင်မလဲ။ ဒါ့ပြင်ဒီကလေးကို မှီခိုနေရသူများ ရှိနေနိုင်တယ်..။ ဒါဆိုရင် ဒီကလေးငယ်(တွေ) အလုပ်အခိုင်း မခံရအောင် ဥပဒေတွေ… စည်းမျဉ်းတွေ ထုတ်ပြန်တာက ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါ့မလား ..။
ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပုံးမြို့တွင် စာရွက်တရွက်တန်ဘိုးက ကျပ်တထောင် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုရမည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနထံမှ ဖုန်းကတ် လပေးစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ထားသည့် ၀န်ထမ်းတို့ ပြီးခဲ့သည့် လခထုတ်ရက်အတွင်း ငွေသွင်းရာတွင် "ဘဏ်ချလံခ" ဟု ဆိုပြီး ကျပ်တထောင် ပေးခဲ့ရကြောင်း ဟိုပုန်းဒေသ ၀န်ထမ်းတို့ထံမှ သိရသည်။
At 11/02/2012 02:49:00 PM No comments:
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တွင် ရခိုင်တစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက်လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခံရ
ရမ်းဗြဲမြို့ ရမ်ဘောက်ကုန်တိုက်နယ် ရွေကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ တစ် ရက်နေ့နံနက်(၁၁)နာရီခန့်ကရခိုင်တစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရသည်။
At 11/02/2012 02:37:00 PM No comments:
ပြင်သစ်ကလပ် ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း (PSG) အသင်းသည် ခရစ္စတီယာနို
ရော်နယ်လ် ဒိုနှင့် ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုတို့အား ပေါင်စတာလင် သန်း(၁၀၀) အကုန်အကျခံ ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာ သည်။
At 11/02/2012 02:20:00 PM No comments:
ဦးသိန်းစိန်က လာအိုကို ၃ ကြိမ် ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
At 11/02/2012 01:54:00 PM No comments:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မုံရွာ ခရိုင်၊အရာတော်မြို့နယ်၊ဇရစ် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် နှစ်ဖာ လုံခန့်ရှိ သနပ်ခါးခြံဝင်းတစ်ခုတွင် ပျားဖွတ်ရန် ပျားအုံလိုက်ရှာသူ တစ်ဦးက သစ်ပင်တွင်ကြိုးချသေ ဆုံးနေသော လူသေအလောင်း တစ်လောင်းအား အောက်တိုဘာ (၂၇)ရက်၊ညနေ (၅)နာရှိအချိန် ခန့်က တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အရာ တော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြား
At 11/02/2012 01:24:00 PM No comments:
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်သို့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည့် စားသုံးဆီများ၊ အရက်တု၊ ကြက်ဥ အတုအပါအ၀င် စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များစွာ ၀င်ရောက်လျက် ရှိသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
At 11/02/2012 01:14:00 PM No comments:
At 11/02/2012 12:44:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး သို့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၊ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်းရန် ယနေ့တွင် သဝဏ်လွှာ တစ်စောင် ပေးပို့လိုက်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
At 11/02/2012 12:23:00 PM No comments:
At 11/02/2012 11:51:00 AM No comments:
ယူကေ တွင် MBA သင်ယူလိုသူများအတွက် လက်တွေ့အလုပ်အကိုင်နေရာချထားပေးမူ့အပြင်လစာပါရရှိ်မည့် အစီအစဉ်ပါရှိသော MBA+ Business Placement ကို University of Portsmouth တွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက သိရသည်။
At 11/02/2012 11:41:00 AM No comments:
မလေးရှားနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် မနေ့မနက် ၈ နာရီမှစ၍ UNHCR မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ် များ ကို မလေး ရှားနိုင်ငံ Cheras Stadium အားကစားကွင်းတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရာဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ကျော်ခန့်အား
At 11/02/2012 11:07:00 AM No comments:
အောက်တိုဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦး၊ မြေပုံ၊ စစ် တွေ၊ ကျောက်ဖြူ စသည့်မြို့နယ်များမှ ဒေသခံများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲစခန်းများ၌ ခေတ္တ ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားသူ အများစုသည် ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများ ဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဒေသခံများ က ဧရာဝတီ
At 11/02/2012 10:45:00 AM No comments:
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုး ရွားရွားကြုံခဲ့ရတဲ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဗဟို အစိုးရအနေနဲ့ အရှည် သဖြင့် ကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပြုလုပ် ပေးသွား မှာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူလူထု ကိုပြော သွားပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ခရစ် ခရစ္စတီ လည်း အတူလိုက် ပါသွားပြီး နယူးဂျာစီပြည်နယ်နဲ့ နယူးယောက် မြို့တော်တ၀ိုက်က မုန်တိုင်းဒဏ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ သန်းနဲ့ချီ တဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို စောင့်ရှောက် အကူညီပေးဖို့ မစ္စတာ အိုဘားမားက တိုက်တွန်း
At 11/02/2012 10:35:00 AM No comments:
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခဲ့ ချိန်မှ စ၍ ရုရှား နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ စီးနင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားဖြစ် ကျည်ကာ ကားများ အစား ပြည်တွင်းဖြစ် ကားများကို အသုံးပြုရန် သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
At 11/02/2012 10:33:00 AM No comments:
ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းကို ပြီးခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာမှာ မကြာခင် ချေးငွေများ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
At 11/02/2012 10:24:00 AM No comments:
နေပြည်တော်နဲ့ အနီးတ၀ိုက်က တရားသူကြီးတွေ သတိထားဖို့ နေပြည်တော် တ၀ိုက်က တရားရုံးတွေမှာ ကပ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာပါ။
At 11/02/2012 10:23:00 AM No comments:
At 11/02/2012 10:21:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဌာန နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနက နေပြီးတော့ တရားမ၀င် ကုန်တင်ပို့မူတွေ ကျဆင်းရေး အတွက်နဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့ ဘေးအန္တရယ်ကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ကစပြီး တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှု
At 11/02/2012 10:19:00 AM No comments:
At 11/02/2012 10:15:00 AM 1 comment:
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ တက္ကသိုလ် များနှင့် အချက်အလက် များ ဖြန့်ဖြူး နိုင်ရန် အတွက် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
At 11/02/2012 10:00:00 AM No comments:
အသက် ၄ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ကို မေ့မျော့ သွားသည် ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့ မှု မှတ်တမ်းတင်ထား သည့် ဗီဒီယို ယူကျူးပေါ်တွင်ပျံ့ နှံ့ 
တရုတ် ပြည် ဂွမ်ဂျု ခရိုင် ရှိ အထီးကျန် စိတ်ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များ စောင့် ရှောက် မှု ဂေဟာ မှ အသက် ၄ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ကို သင်ကြား ပြသသူ ဆရာမ က ခန္တာ ကိုယ် ကျိုး ပဲ့ မှု ဖြစ် ပြီး မေ့မျော့ သွားသည် ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့ မှု မှတ်တမ်း
တင်ထား သည် ဗီဒီယို မှာ တရုတ် အင်တာနက် သုံးသူ များ ကြား တွင် ဒေါသူပုန် ထ စရာ ဖြစ်နေ ပြီး CNNFOX , Guardian စသည့် မီဒီယာများ တွင် အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြထားပါသည်။
At 11/02/2012 09:59:00 AM No comments:
ကနေဒါနိုင်ငံ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပြင်းအား ၇.၇ ရစ်ချက်စကေး ငလျင် လှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝါရီ မှာ ဆူနာမီလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငလျင် လှုပ်ပြီးနောက် စနေ့ ညပိုင်းမှာပဲ ဟာဝါရီကျွန်း ကမ်းတလျှောက်မှာ ဆူနာမီ အရေးပေါ် သတိပေးချက် ဥသြသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟာဝါရီ ကျွန်း ကမ်းရိုးတန်း
At 11/02/2012 09:04:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပေး လိုက်ပါပြီ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ ပြန်လည် တင်သွင်းလာတဲ့ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အချိန်အတော်ကြာ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပြီးတော့မှ အတည်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တချို့က ပြောပြပါတယ်။ မကြာခင်
At 11/02/2012 08:50:00 AM No comments:
At 11/02/2012 08:49:00 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးသိရှိနားလည်ဖို့နဲ့ ဘယ်လိုအကူအညီတွေ ပေးရမယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ဖို့အတွက် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်နဲ့ Australia နိင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ခရီးစဉ် ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့
At 11/02/2012 08:48:00 AM No comments: